အမေ့စာပေစကား အဓိပ္ပာယ်များ ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Friday, October 02, 2015 Knowledge, Life No comments
Written by ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်
မိခင် (အမေ) ဆိုသော အမျိုးသမီးတို့ အကြောင်း အရာ ကလေးက စတင်ပြီး ရေးသား တင်ပြလိုက်ပါရ စေ။ အမေ များကို အားလုံးက ချစ်ခင်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားကြ လွန်းလို့ပါ။
‘အေ . . . အေး . . . ရဲ့ . . . အို . . . အို’
သားတို့၊ သမီးတို့သည် အများအားဖြင့် မိခင်ကိုပို၍ ချစ်တတ် ကြသည်။ ဘာမျှ မသိတတ်သေးသော အူဝဲကလေး အရွယ်က အစပြုပြီး ‘အေ . . . အေး . . . ရဲ့ . . . အို . . . အို’ ဆိုသော မိခင်၏ချော့သံ လေးကို ကြားဖူး ခဲ့ကြသော အူဝဲလေးတို့မှာ ဘာအဓိပ္ပာယ်မှ မပါသော မိခင်၏ချော့သံလေးကို ကျေနပ် ခဲ့ကြသည်။ ဘာအဓိပ္ပာယ်မှ မပါသော ဆိုသည့် စကားကို ကျွန်တော် သုံးလိုက်ခြင်းမှာ အမှားကြီးမှားပါ လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်မူ အူဝဲလေးတို့တွင် ကျေနပ်နှစ်သိမ့် မှုနှင့် အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာပါ သော ကလေးချော့ အမေ့ကဗျာလေးမှာ အူဝဲလေးတို့အတွက် အဓိပ္ပာယ်များစွာ ပါရှိတာ နားလည်ကြ၍ ငိုနေရာမှ ရပ်ခဲ့ကြသည်။ အငိုရပ်ခဲ့ရာမှ အိပ်ပျော်သွားသည်။ အမေ့မေတ္တာရေဖျန်း ခံလိုက်ရခြင်းမှာ အေးမြသည်။ ချိုသာသည်၊ နာဝင်ချိုအေးမြပါသည်။
အမေနှင့်အူဝဲလေး နဖူးချင်းထိလိုက်၊ ပါးချင်းကပ်လိုက်ဖြင့် အမေနှင့်အူဝဲတို့ အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းမြောက် မြား စွာပါသော မျက်စိဖြင့် စကား ဖလှယ်နေသော အပြုအမူလေးတို့မှာ အူဝဲတို့နားလည်၍သာ ပြုံးကြ သည်။ တခစ်ခစ်ရယ်၍ အဖြေပေးသည်။ အူဝဲက သူနားလည်ကြောင်း၊ မိခင်ကိုချစ်ကြောင်း၊ မိခင်နှင့် နေရ တာ ကျေနပ်ကြောင်း အဓိပ္ပာယ်တို့ဖြင့် အူဝဲလေးတို့ အဖြေပေးကြပါသည်။
နိုင်ငံတကာ အမေ့အကြောင်းကို ကျွန်တော် ရှာဖွေစုဆောင်းလာခဲ့ရာ တန်ဖိုးကြီးလှသော စာပေများကို ယခု ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါ၍ လွန်စွာဝမ်းမြောက် ရပါသည်။ အများ အတွက်လည်း ကျေးဇူးရှိမည်ဖြစ် ၍ ဖော်ပြ လိုက်လိုစိတ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ အနုပညာရှင် Mr.Howard Johnson ရေး သားခဲ့သော အမေဆိုသည့် စာစကားဂုဏ်ပြုစာစု ကဗျာလေးကို မျိုးဆက်သစ်တို့ ခံစားသိရှိ နားလည်နိုင် စေရန် မျှဝေလိုက်ပါ၏။ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်ပေးသော ဘုန်းတော်ကြီး၏ဘွဲ့မှာ အရှင်ဣန္ဒာ စာရ (မုံရွာ) ဖြစ်ပါသည်။
အမေက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးခဲ့တဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော အရာတွေ။
O = means only that she’s growing old.
T = is for the tears she to save us.
သားသမီးတွေအတွက် အမေကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေ။
H = is for the heart of purest gold.
E = is for her eyes, with love light.
မေတ္တာကြင်နာခြင်း အပြည့်အဝနှင့် စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အမေ။
R = means right she’ll always be.
အမြဲတမ်းမှန်ကန်သော အမေ့ဆုံးမစကားများဟု မဆုံးနိုင်သော စကားများဖြင့် အဆုံးသတ်ထားပါ သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ အနုပညာရှင်၏ စာနုကဗျာလေးကို မြန်မာပြည်အညာဒေသမုံရွာမှ ဆရာတော် ဘုရားကမြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းများစွာ ပါရှိလှပါသော မြန်မာ ဘာသာပြန်ဆိုချက် ဖြစ်ပါသည်။
Mother ဆိုသော စကားလုံးကို အဓိပ္ပာယ်ပေါင်းများစွာဖြင့် ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြသည်မှာ တန်ဖိုးများစွာရှိခဲ့ပါ သည်။ ကျွန်တော်ဖြင့် ဤစာပိုဒ်အမေ့အဓိပ္ပာယ်ကို ထပ်ကာထပ်ကာ ဖတ်နေမိပါသည်။ စိတ်ထဲမှာ လည်း အမေ့ကျေးဇူးများကို ကြည်နူးနေမိပါသည်။
ငွေလစန္ဒာသည် လောကဓာတ်တစ်ခွင်လုံးကို အရောင်အဆင်းဖြင့် အလှဆင်ပေးပါသည်။ လ အရောင် နှင့်အေးမြမှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ကြည်နူးမှုကို ခံစားရပေသည်။ လမင်း၏ကမ္ဘာကြီး အပေါ်ကျေးဇူးပြုမှု အမေ့မေတ္တာကို နှိုင်းယှဉ်ချိန်ဆတိုင်းတာကြည့်လိုက်မည်ဆိုပါက မိခင်မေတ္တာသည် လမင်းထက်နှစ် လေးသာသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိကြောင်းပါခင်ဗျာ့။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ မိန်းကလေးကို ချစ်လိုသူယောက်ျားလေး တစ်ယောက်အကြောင်းမှာ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းလှပါသည်။ သူချစ်နေသော မိန်းကလေးကပြောလိုက်သောစကားမှာ ‘ငါနင့်ကိုချစ်တဲ့နေ့ဟာ နင့်အမေရဲ့ရင်ကိုခွဲပြီး နှစ်လုံးသားကို ဓားနဲ့ဖြတ်ယူလာပေးတဲ့နေ့ဟာ နင့်ကိုငါချစ်တဲ့နေ့ပါပဲ”
ဤစကားကြားလိုက်သော ယောက်ျားလေးမှာအိမ်ကိုပြန်ပြေး၍ မိခင်ကြီးရင်ကိုဓားဖြင့်ခွဲ နှလုံး ကိုဖြတ် တောက် ခဲ့ပြီး လက်မှာမြဲမြဲကိုင်၍ မိန်းကလေးထံပြန်ပြေးအလာမှာ လမ်းတွင်ခလုတ်တိုက်လဲ သွားခဲ့ပါ သည်။ ပြင်းထန်စွာလဲကျသွားသော ယောက်ျားလေးဘေးတွင် လွင့်ကျနေသည့် မိခင်၏နှလုံး သားမှ ပြောနေသောစကားမှာ ‘သား ဘယ်နားနာသွားသေးသလဲ’ ပါတဲ့ ခင်ဗျာ။
ဤစကားမှာမိခင်၏ နှလုံးသားမှ ပြောသောစကားဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တက်ရောက်နေသော နိုင်ငံ ခြား တက္ကသိုလ်မှ တရုတ်ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်က သူတို့တိုင်းပြည်က ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ကိုပြောပြ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မိခင်တို့အကြောင်း ပညာရှိ၊ ပညာရှင်တို့ရေးခဲ့သည်တို့ကို ပုံပမာပြုထားခဲ့သည်မှာ မိခင်မေတ္တာ သည် မြင်းမိုရ်တောင်၊ သမုဒ္ဒရာကိုမင်ရည်ပမာပြု၊ ကမ္ဘာကြီးမျက်နှာပြင်ကို စာပေလွှာအဖြစ်ထား၍ ရေး သား ပြုစုခဲ့ကြပါသော်လည်း မိခင်အကြောင်း ပြည့်စုံကုံလုံသည်ဟူ၍ အဘယ်မှာရှိခဲ့ပါ၏နည်း။
ကျွန်တော်၏မိခင် (အမေ) အကြောင်းရေးရန်ရှာဖွေပြုစု စုဆောင်းခဲ့သော နိုင်ငံတကာမှ အနုပညာ စာ ပေများထဲမှ လွန်စွာတန်ဖိုး အနဂ္ဂကြီးမားလှပါသော စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေ တို့ထက်တန်ဖိုးကြီးလှပါသော အမေ့ အကြောင်းအရာတို့ကို မမောနိုင်မပန်းနိုင် ရှာဖွေခဲ့သောသူဟာ ကျွန်တော်ပါ။
ကျွန်တော်တို့အမေအကြောင်း ပြောပါရစေဦး။ တစ်နေ့သောနေ့တွင် တက္ကသိုလ်စာတိုက်မှ စာပို့သမား ကျွန်တော့်အစ်ကိုထံ စာတစ်စောင်လာပေးပါသည်။ လိပ်စာမှာ အောင်ခင်တင့်ဆိုသော စာမှန်သော် ငြားလည်း ‘ရံကုန်သက်ကသိုရွှေဗိုဆောင်’ ဟုပါရှိပါသည်။
ခဲတံ တံတွေးစွတ်စွတ်ပြီး ရေးသားထားသည့် လက်ရေးဖြင့် ‘သားတို့ရဲ့ ဘွဲ့ယူအခမ်းအနားကို အမေ လာတက်မယ် လူကြုံကောင်းလို့လာခဲ့မှာပါ’ စာတစ်ရွက်လုံး အမေပေါင်းချင်သလိုပေါင်းထားသော စာ လုံးများအပြည့်ဖြင့် အမေ့စာဖြစ်ပါသည်။ စာရေးဆရာကြီးများဖြစ်သည့် အောင်လင်း၊ မြသန်းတင့်တုို့ ဖတ်ကြည့်ပြီး ‘အမေသီရဲ့စာ မှတ်တမ်းပြုရမယ်ဟေ့’ ဟု အော်ပြောသည်ကိုကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန် တော်ကတီတီစီ ၁၀ တန်းကျောင်းသားပါ။
စစ်ပြီးခေတ် ပထမဦးဆုံး ဘွဲ့လွန်အခမ်းအနားကို ဆိုင်းဝိုင်းကြီးနှင့် တခမ်းတနား၊ နာမည်ကြီးလှပါ သော သစ်ပုပ်ပင်ကြီးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မြေကွက်လပ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ယခုခေတ် ဘွဲ့ယူနေပြီဖြစ်သော အဆောက်အအုံမှာ ဂျပန်ခေတ်က ဗုံးကျထားခဲ့ပါ၍ ပြိုကျနေသေး သော အဆောက်အအုံကြီးသာဖြစ်ပါသည်။ မပြုပြင်ရသေးပါ။ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များပင်လျှင် ရှိနေကြ သေးပါသည်။
ဘွဲ့ယူအခမ်းအနား ကျင်းပသောနေ့က အမေနှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေကြပါသည်။ အမေ၏ မျက်စိမှုန်၍မမြင်ရသော အကြောင်းအရာတို့ကို ကျွန်တော်ပြောပြနေရပါသည်။
‘ဘွဲ့ယူမယ့်သူတေ စင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီး နေရာယူနေကြပါတယ်အမေ၊ ဘွဲ့ဝတ်ရုံတွေနဲ့ပါအမေ၊ အမေ အစ်ကိုလေးဘွဲ့ယူဖို့ ထိုင်ရာကထနေပါပြီ၊ လော်စပီကာက အစ်ကို့နာမည်ဖတ်လိုက်ပါပြီး အမေ၊ အစ်ကိုလေးဘွဲ့ယူနေပြီ၊ သူ့နာမည်ဖတ်သွားတာ အမေကြားတယ်နော်။’ အားလုံးဝမ်းပန်းတသာဖြစ် နေစဉ် အမေပြောသော စကားတစ်ခွန်းမှာ ‘မင်းတို့အဖေရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ၊ သူမသေမီငါ့ကိုမှာ သွားတာက ကလေးတွေကို ပညာတတ်အောင် စာသင်ပေးပါလို့ ပြောသွားတယ်’ ဆိုသော စကားပြော ရင်းမျက်ရည်လေးစို့လာပါ၍ ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောရမည်မသိ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
‘ပခုက္ကူဈေးထဲက ငှက်ပျောဆိုင်ပြန်ရောက်ရင်၊ ဆိုင်နီးချင်းတွေ မေးကြမြန်းကြလုပ်ခဲ့ရင် ငါဘာမှမပြော တတ်ပါဘူးဟယ်’
အမေသည် အဖေမှာခဲ့တဲ့စကားကို မြေဝယ်မကျနားထောင်ခဲ့တာကြောင့် အောင်ခင်မြင့် B.A, Ed; B.Ed; B.E.S.;၊ အောင်ခင်တင့် B.A,s B.L, B.C.S ဘွဲ့များရကြပြီး ကျွန်တော်လည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မန် ချက်စတာတက္ကသိုလ်က ဘွဲ့လွန်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ ရပြီးခဲ့ပါပြီ။ အမျိုးသမီးတို့အကြောင်းပြောရာ မှာ အမေဆိုသူတို့ တာဝန်ကျေပွန်ကြပါအြေအကာင်း မိခင်တို့အကြောင်းပါခင်ဗျား -
ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုသုံးယောက်ကို လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်မြောက်အောင် သွန်သင်ပြုစုပျိုး ထောင် ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပါသော ပခုက္ကူဈေးကြီးအတွင်းမှ ငှက်ပျောသီးရောင်းခဲ့သူ ကျွန်တော်တို့ ၏မွေးမိခင်ကြီးကို ရည်ညွှန်းရေးသားလိုက်ရပါသည်။
မိခင်ကြီးသည် အသက် ၈၄ နှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဘဝတစ်ပါးသို့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သား ဖြစ်သူ လွှတ်တော်ညွှန်ချုပ်ဖြစ်နေပါ၍ အထူးစီမံမှုဖြင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်တို့၊ ဝန်ကြီးတို့နှင့်အတူ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟကြီးငယ်တို့ဖြင့် တခမ်းတနားအမေ့နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် နာရေးကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။ အမေ့နောက်ဆုံးနေ့ စည်ကားလှပါ၍ မြေးလေးတို့က ‘အဘွားသေတာ ပျော်လိုက်တာ’ ဟု စကားအဖြစ် ကျန်ခဲ့ပါသည်။
ဇူလိုင်လ (၂၂) ရက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ကိုမျိုး(သုတစွယ်စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+ မှ ပြန်လည်မျှဝေသည်။